Dhakhaatiir Ruush ah oo cabsanaya ka dib markii ay daweeyeen dad laga qariyay waxa haya - BBC News Somali
Dhakhaatiir Ruush ah oo cabsanaya ka dib markii ay daweeyeen dad laga qariyay waxa haya
23 Agoosto 2019
Dhakhatiir Ruush ah oo daweeyay dad ay waxyeelo ka soo gartay shucaac, ka dib markii uu qarxay hub ay milatarigu leeyihiin ayaa hadda ka cabsi qaba in ay khatar soo gaartay lafahoooda.
Labo dhakhtar oo ku sugan Arkhangelsk ayaa la hadlay laanta afka Ruushka ee BBC, iyaga oo ka warbixiyay dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaas ee dawaynta loo keenay isbitaalka ay ka shaqeeyaan, dhakhaatiirtan ayaa dalbaday in aan magacooda la shaacin.
Shan injineer oo qaabilsan nukliyeerka ayaa dhintay bishii Agooso ka dib markii uu qarax ka dhashay goob tijaabo laga samaynayay oo ku taalla Nyonoksa, sida ay masuuliyiintu sheegeen. Lix ruux oo kale ayaana isla qaraxaas ku dhaawacantay.
Madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in tijaabadaasi ay ahayd hub noociisu cusub yahay.
Xatooyada xogta Ruushka: Duni dahsoon oo ay wax kasta iib yihiin
'Waxaan sameeyay ficil edeb darro ah, xilkii ra'iisul wasaare ku xigeenkana waan iska casilay'
Mulkiilaha kooxda Chelsea oo qaadanaya dhalashada Israa’iil
Masuuliyiinta ayaa faahfaahin yar ka bixiyay dhacdadaas. 14 Bisha Agoosto waaxda saadaasha hawada Ruushka ee Rosgidromet ayaa shaacisay in heerka shucaaca uu ka sare maray in kabadan 16 heerkii caadiga ahaa, arrintaasina ay ka dhacday Severodvinsk oo ah magaalo 47km bariga ka xigta Nyonoksa.
Sida ay muujinayso xogta rasmiga ah shocaaca Severodvinsk ma ahayn mid culus oo keeni kara shocaac xanuun laga qaado.
Khuburo ku sugan Ruushka iyo kuwo reer Galbeed ah ayaa sheegay in ay u badan tahay in tijaabadani ay la xiriirto 9M730 Burevestnik oo ah hab cusub oo lagu hagaajinayo gantaallo nukliyeer ah . Kaas oo ururka Nato uu u yaqaanno "Skyfall", Putin ayaa sannadkii hore ee sheegay in teknoolajiyaddu ay gantaalka u horseedi doonto in uu socdo masaafo aan xad lahayn.
Dhakhaatiirta ku sugan isbitaalka Arkhangelsk oo la hadlay BBC, ayaa sheegay in ugu yaraan 90 ruux ay ku daweeyeen qaybta bukaan socodka, balse milatarigu uusan uga digin in ay ku sumoobi karaan oo khatar nukliyeer jirto.
Cabsida ku saabsan khatarta
Dhakhaatiirtan ayaa ku sugnaa isbitaalka shacabka ee Arkhangelsk oo heer gobol ah, kaas oo lagu daweeyay saddex ruux oo dhaawac ah, halka saddex kalana laga geeyay isbitaal kale oo ku yaalla Arkhangelsk kaas oo la dhoho Semashko kuna qalabaysan qalab loogu talagalay xaaladaha degdegga ah ee shucaaca.
Image caption Isbitaalka Semashko
Dhakaatiirta ayaa sheegay in sababta ay u hadlayaan ay tahay in ay u baqayaan caafimaadkooda ayna doonayaan in aysan soo laabanin halis kale oo badqabka ku saabsan.
"Illaahay naguma keenee waxaan ka baqaynaa in marka dambana ay noo keenaan toban ruux oo u baahan in la daweeyo balse ay naga qarinayaan macluumaadka la xiriira xanuunkooda."
Image caption Mid ka mid ah qalabka shocaaca lagula socdo ee Ruushka
Sida loo qarinayo macluumaadka qaraxan ku saabsan ayaa horseeday in la barbardhigo masiibadii nukliyeerka ee Chernobyl taas oo dhacday sannadkii 1986, masuuliyiintii Sovietka ayaana go'aansaday in aysan ku degdegin shaacinta macluumaadka saxda ah ee sida ay wax u dhaceen.